अख्तियार सरकारको लाचार छाया भएको आरोप - TodayKhabar
अख्तियार सरकारको लाचार छाया भएको आरोप
काठमाडौंः प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सरकारको लाचार छाया भएको आरोप लगाएको छ। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसालले यस्तो आरोप लगाएकी हुन्।
हिजोमात्रै अख्तियारले कांग्रेसका उपसभापति तथा सांसद विजयकुमार गच्छदारसहितलाई मुद्दा हालेपछि कांग्रेस आक्रोशित छ। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा खरिद–बिक्री प्रकरणमा गच्छदार मुछिएका हुन्। त्यतिबेला उनी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री थिए ।
नेपाल समयको अनुसार, संसद बैठकमा सचेतक भुषालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा मुद्दा दायर गर्न मिल्छ ? भन्दै प्रश्न गरिन् । ‘आयोग सरकारको लाचार छाया भयो । तटस्थ भनिएको आयोगले सरकारको राजनीतिक पूर्वाग्रहमा प्रभावमा परेर मुद्दा दायर गरेको छ । यो लोकतान्त्रिक भएन । प्रतिपक्षीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले भनिन् ।
उता, राष्ट्रिय सभामा पनि कांग्रेस सांसदहरूले अख्तियारकाे कदमकाे विराेध गरेका छन्। सांसद बद्री पाण्डेले भेदभावपूर्ण रूपमा मुद्दा चलाइएकाे भन्दै मुद्दा फिर्ता लिन माग गरे।
दाजु भाईबीचको राजनीतिक द्धन्दः भाइलाई पराजित गर्दै दाई विजयी
प्रदेश २ सरकारमाथि बज्रपात हुने खतराः मुख्यमन्त्री हटाउने अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने
नेपाल– अष्ट्रेलिया सम्बन्ध ६० औँ वर्षमा प्रवेश: उन्नयनको भरपर्दो साझेदार
बेलायती प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य स्थिती नाजुक बनेपछि आईसीयूमा भर्ना
पाटन अस्पतालमा कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु
काठमाडौंको टोखा कोरोनाको हटस्पटः संक्रमितको संख्या ८ सय, ३ को मृत्यु
पूर्वसचिव पत्नी हत्या प्रकरणः हत्या आरोपि विजयको मोबाइलमा यस्तो देखियो, अब के होला ?
अनुसन्धानकर्ताको खुलासाः कोरोना भाइरस कुन वस्तुमा कति घण्टा जीवित रहन्छ ?
बिहीबार सूर्यग्रहण :१४४ वर्षपछि महासंयोग जुर्दै, कुन राशिलाई कस्तो प्रभाव ?